caga la yaabka leh iyo geesinimada taariikhda.
Su'aal caga la yaabka leh iyo geesinimada taariikhda.
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #307 by Dariussssss
Captain Bryce McCormick degay diyaaradda si ammaan ah ka dib markii albaabka xamuul danbe si lama filaan ah ay burbureen. Ma jiro mid rakaab ah ayaa ku dhaawacmay.
Captain Roger Greaves fogaadaa burburin diyaarad ka dib oo dhan failure afar matoorada sababa ash Kobenhagen ka qarax ee Mount Galunggung.
Captain Bob Pearson ah pilot khibrad dayuurad yar badbaadiyey oo dhan 61 rakaab saarnaa by caga diyaarad ka dib markii yaraysi gami ku keeni karo khasaaraha ka mid ah oo dhan awood electronic.
Pilot Robert Schornstheimer degay diyaaradda daqiiqado ka dib markii 13 decompression qarxa jeexeen qaybta weyn oo saqafka. Clarabelle Lansing, midiidinka diyaarad ahaa xaaqan oo ka kursi, rakaabka kale 90 aan la dhaawacay.
Co-pilot Alastair Atchison degay diyaarad si ammaan ah ka dib markii uu si xun u-rakibay failure guddi muraayadda. Oo sirkaalkii Tim Lancaster barka ahayd ka mid ah qol oo aan jir ahaan adkaysan kari waayay diyaarad.
Pilot John fuley u suurtagashay in ay dalka diyaarad ka dib markii a failure matoorada lama filaan ah uu keeno kiristaalo baraf tuubbo shidaal oo ay taas, in ay u noqda, sababa xadaysan ee socodka shidaalka.
Captain Chesley Sullenberger III degay diyaarad si nabad ah ku River Hudson adhiga ah berriga Kanada diyaaradda naafo ka dib.
Duuliyayaasha Malcom Waters iyo David Hayho degay diyaarad at ku dhowaad laba jeer sare xawaaraha lagu talinayo ka dib markii awood in la beddelo riixdaan.
Captain Richard Champion de Crespigny degay diyaarad A380 ka dib markii tiro engine 2 qarxay, dhaawac garabka ah oo keenaya dab taangiga shidaalka ah. Dhammaan rakaabka 469 on board ayaa xitaa ma yeeli.
10. Kabtanka Flybe The gacanta kuwaas oo dhacay
Waxaan ku dhameysan on note yar qosol. Caga ee xaaladaha gusty waa dhib yar loogu talagalay tijaabo kasta. Waa kaaftoomi weyn marka gacanta bedalay ayaa kaliya ay timahu ka. Tani waa si hufan waxa ku dhacay mid ka mid ah kabtanka Flybe in 2014. Wax yar ka hor touchdown, "uu addinka bedalay noqday ka go'ay haysa harqoodka, isaga loo diiday gacanta ku diyaaradda," ayuu yiri Shilalka Air warbixin Laanta Baadhista ah.
Ma kor ku xusan, ma garanayo sababta ...
Air Transat Flight 236 ahayd diyaarad transatlantic xidhay Lisbon, Portugal, ka Toronto, Ontario, Canada, in laga badiyay xoogga oo dhan, halka duulaya badan Badweynta Atlaantik on August 24, 2001. Airbus A330 The gaaray dhamaystiran awood khasaare ay sabab u tahay dillaac shidaalka sababa dayactirka aan habboonayn ah. Captain Robert Piché, 48, ah pilot khibrad dayuurad yar, iyo Sarkaalka First Dirk de Jager, 28, duulay diyaaradda si ay u soo degtey degdeg ah guulaha Azores ah, badbaadinta dhamaan dadka 306 (rakaabka iyo shaqaalaha 293 13) on board. Inta badan rakaabka diyaarad ay ahaayeen Kanada booqanaya Yurub iyo qurba joogta reer Portugal soo laabtay booqo qoyska ee Portugal. In ku saabsan 19 daqiiqo, Piché iyo De Jager duulay ay diyaarad aan itaalka lahayn qaar ka mid ah km 120 (75 miles), intaas ka badan jet kasta rakaabka ee taariikhda. Rikoorkii hore ayaa sidoo kale lagu dhigay by duuliye Canadian, inta lagu guda jiro dhacdo caan 1983 Gimli dayuurad yar
Waxaa laga yaabaa 24, 1988
TACA Flight 110 ahayd duulimaadka diyaaradaha jadwalka caalamiga ah ku shaqeeya by TACA Airlines, safarka ka Belize inay New Orleans. On May 24, 1988, ee Boeing 737-300 awood badiyay labada matoorada laakiin duuliye ay ka dhigtay caga a deadstick guul on levee caws ah, iyadoo mid ka mid ma saarnaa soo gaaray in ka badan dhaawac fudud. Oo sirkaalkii ee horyaalka, Carlos Dardano ee El Salvador, ayaa laga badiyay hal il in ay is weydaarsanayeen diyaarad yar si ay u El Salvador, kaas oo qaliin dagaal sokeeye waqti.
Source: The Aviators, Wikipedia
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #309 by Colonelwing
Ma aha in la sameeyo sheeko weyn out of this ,, CPT Robert Piché ka Ait-Transat waxaan perso aqaan isaga.
Waxaan nahay ka mid ah sano waxbarasho duulaya. A nin bararin dhab ah haddii aad leedahay inay ka hor tagaan mustaqbalka
inta aad qaadanaysid diyaarad on Air-Transat.
Haa ,, dunida yar haddii aad dhihi karaa ... Aviation waa dunida yar!
Air Shil Baarista Flying On faaruqa Air Transat 236
Tani waa ka caddeyn rasmi ah iyo cajalado qol
Waxay sidoo kale soo saaray filim uu noolaa & duulimaadka AirTransat 236.
Ku raaxayso film de on saldhig story dhab ah.
Piché galaysa Ciel & Terre
Un film qui illustre la hardamaya du Taliyaha de doonan du vol AirTransat 236, Robert piché.
Last edit: 2 sano 3 bilood ka hor by Colonelwing.
sano 2 3 bilood ka hor #311 by Dariussssss
Waxaan u badan tahay in magaca doonaa this topic galay '' caga la yaabka leh '', sababta anna waxaan leeyahay mid ka badan in aad ku darto,
Garuda Indonesia Flight 421 ahayd diyaarad jadwalka qoyska shaqeeya by Indonesian side calanka Garuda Indonesia safarka ku saabsan 625 km (388 mi) ka Ampenan in Yogyakarta. On January 16, 2002, horyaalka kala kulantay hawl onkod daran inta lagu guda jiro hab ay u socoto, soo gaaray flameout labada matoorada, iyo inta aanba la webiga a-gacmeed, taasoo keentay in mid ka mid ah dhimasho iyo dhaawacyo dhowr ah. Sida diyaaradda iyada oo lakabka hoose ee daruuraha qiyaastii 8,000 ft (2,400 m) soo degay, duuliye arkeen Solo Bengawan webiga iyo go'aansadeen in ay isku dayaan in ay iska ilaawaan webiga oo la qaybood oo marsho laabatay. nidaamka god waxay ahayd guul, diyaaradda degay on calooshiisa biyaha gacmeed, iyadoo sooctey, baalal iyo meelaha ay gacanta ku inta badan dhawrsan tago. Ma jirin dabka.
Colonelwing, haddii aad mar kale aragtaan, isaga u sheegi waxa uu taageere u helay halkan. Maxaa uu sameeyey, igu dhalisay inay iska ilaawaan waxa ay ka dhigan tahay in la siiyo ilaa. Oo haa, runtii dunida yar.
sano 2 3 bilood ka hor - sano 2 3 bilood ka hor #313 by Colonelwing
Waxaan David doono ,,,
Marna ha quusan ama gacmahaaga dejiyeen ,, dhibaato ah ama hawl kasta oo sida had iyo jeer xal ,, xusuuso in!
Your shaqo fiican qabanayaan halkan @ Rikoooo ,, Xusuusnow in!
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.185